ग्लोबल कोरोनाभाइरस संक्रमण शीर्ष 30 मिलियन::Jalpa Khabar
ग्लोबल कोरोनाभाइरस संक्रमण शीर्ष 30 मिलियन
Published on: २ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०५:१४
अमेरिका: अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले देखाएको तथ्यान्क अनुसार विश्वभर पुष्टि भएको कोरोनाभाइरसको संख्या ३० मिलियन नाघेको छ।
गत वर्ष चीनमा प्रकोप सुरु भएदेखि ९४०,००० भन्दा बढी कोविड १९ ले मरेका छन्।
सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरू अमेरिका, भारत र ब्राजिल हुन्, तर त्यहाँ युरोप भरि संक्रमणहरूको एक नयाँ स्पाइक छ।
धेरै उत्तरी गोलार्ध देशहरू अब जाडो नजिक आउने बित्तिकै महामारीको दोस्रो छालको लागि पछाडि हेरिरहेका छन।
कोरोनाभाइरस: ग्लोबल हटस्पटहरू कहाँ छन्?
फ्रान्स र युरोपको अन्य भागहरूमा के नियमहरू छन्?
कोविड – १९ सिंगापुर: एक ‘असमानताको महामारी’ पर्दाफास भयो
बेलायतमा, सरकारले संक्रमणको दोस्रो बृद्धिलाई ढिलो गर्न प्रयास गर्न प्रतिबन्धको छोटो अवधि सहित थप इङ्य्यान्डले कदम चाल्ने विचार गरिरहेको छ।
युरोप बाहिर, इजरायलले दोस्रो राष्ट्रव्यापी लकडाउन पछि ल्यायो शुक्रवार – यो पहिलो विकसित राष्ट्र हो।
अफ्रिकामा एक मिलियन भन्दा बढी पुष्टि भएका घटनाहरू रेकर्ड गरिएको छ, यद्यपि महाद्वीपको महामारीको वास्तविक सीमा थाहा छैन। परीक्षण दर कम भनिएको छ, जसले आधिकारिक तथ्या .्कलाई विकृत गर्दछ।
सबैभन्दा खराब प्रभावित राष्ट्रहरूमा के भइरहेको छ?
अमेरिकाको संख्याको हिसाबले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, ६.६ मिलियन भन्दा बढी पुष्टि भएका संक्रमणहरू र १९७,००० भन्दा बढीको मृत्युको साथ।
नयाँ दैनिक संक्रमणको संख्या झर्दै गइरहेको छ, तथापि, जुलाईमा देखिने शिखर तथ्यांकहरूको तुलनामा।
यस हप्ताको सुरुमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोविड १९ को गम्भीरतालाई इन्कार गरे तर यो रेकर्ड गरिएको अन्तर्वार्तामा स्वीकार गरे पनि।
भारतमा, यस हप्ता ज्ञात संक्रमणको संख्या ५ मिलियन भन्दा माथि पुगेको छ – विश्वमा दोस्रो उच्चतम केसलोड।
हालसालका दिनहरूमा ९०,००० शीर्ष स्थानमा भएको भाइरस कुनै पनि अन्य मुलुकको तुलनामा भारतमा धेरै छिटो फैलिएको देखिन्छ। सघन देखभाल ओछ्यान र अक्सिजन आपूर्तिको अभावको रिपोर्टको बीचमा ८०,००० भन्दा बढी मानिसहरू मरेका छन्।
भारतमा अक्सिजनको अभावको सामना गर्नु परेको छ
भारतको कोविड स्कटले बाल विवाह र तस्करीमा वृद्धि देख्छ
ब्राजिलमा ४.४ मिलियन भन्दा बढी पुष्टि भएका घटनाहरू छन् जसमा १३४,००० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ – अमेरिका पछि दोस्रो उच्च मृत्यु हुनेको संख्या।
मिडिया क्याप्शन बोलसनोरोले कोरोनाभाइरसको लागि सकारात्मक परीक्षण गरिसकेको घोषणा गरेपछि उनले आफ्नो मास्क हटाए
राष्ट्रपति जैयर बोलसनोरो कोरोनाभाइरासलाई कम पार्दै आलोचनाको घेरामा परेका छन्, विशेष गरी एक तालाबन्दी विरोधी जुलुसमा भाग लिएर। नेताा हरुु भाइरसलाई “सानो फ्लू” भन्दै आएका थिए – उनी जुलाईमा सकारात्मक परीक्षण गरे।
अर्जेन्टिना र मेक्सिको पनि ल्याटिन अमेरिकाको प्रकोपबाट कडा चोट पुगेका छन्।
अर्जेन्टिनाले बिहीबार बिहान २४ घण्टामा करीव १३,००० बढी घटना रिपोर्ट गरेको छ।
यसैबीच, मेक्सिकोले ३,००० भन्दा बढी दैनिक संक्रमणहरूको पुष्टि गर्‍यो, जसले केसलोडलाई ६८०,००० भन्दा बढीमा पुर्‍यायो।
उही समयमा, प्रति १०,००० व्यक्तिको मृत्यु देश-देशमा उल्लेखनीय रूपमा फरक हुन्छ, स्यान मारिनो, पेरू र बेल्जियमको साथ उच्च दर छ, र भारत सबैभन्दा कम हो।
तलको तालिकामा, देशहरू मृत्यु, मृत्यु दर र कुल घटनाहरूद्वारा क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ। दायाँपट्टि रंगीन पट्टिहरूमा, देशहरू जसमा केसहरू प्रति दिन ५,००० भन्दा बढीमा बढेका छन् तिनीहरू सम्बन्धित मितिमा कालो बारहरू भएका हुन्।
युरोपको अवस्था कस्तो छ?
महाद्वीपमा कोरोनाभाइरसको बढ्दो संख्याले यसै हप्ताको सुरूमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय निर्देशक “वेक अप कल” को रूपमा काम गर्नुपर्दछ।
बिहीबार कोपेनहेगनमा बोल्दै हंस क्लुगेले भने कि गत दुई सातामा युरोपियन सदस्य राष्ट्रको आधाभन्दा बढीमा नयाँ घटनाको संख्या दोब्बर भएको छ।
उनले भने कि गत हप्ता मात्र युरोपभरि ३००,००० नयाँ संक्रमणको रिपोर्ट गरिएको थियो र मार्चमा पहिलो चोटि साप्ताहिक घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको भन्दा बढी भएको थियो।
डब्ल्यूएचओका अनुसार महामारी सुरु भएदेखि यता युरोपभरि ५ मिलियन पुष्टि भएका र २२८८,००० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ।
सुरु theको अन्त्यमा प्रकाश छ?
धेरै देशहरू र कम्पनीहरूले एक खोप पत्ता लगाउन संसाधनहरू ढकढक्याइरहेका छन् जुन सुरक्षित र प्रभावकारी छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भर्खरै भनेका छन् कि नोभेम्बर presidential नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनाव भन्दा पहिले यो खोप उपलब्ध हुनसक्दछ – धेरै स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको चेतावनी भए पनि यो अव्यावहारिक छ भनेर।
अगस्टमा रूसले स्थानीय प्रयोगको लागि खोप इजाजतपत्र दियो – त्यसो गर्ने पहिलो देश। रूसी वैज्ञानिकहरूले पछि खोपमा पहिलो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो भने कि प्रारम्भिक परीक्षणहरूले प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखायो।
तर विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिए कि परीक्षणहरू प्रभावकारीता र सुरक्षा प्रमाणित गर्न निकै सानो थिए।
कसले पहिले खोप पाउने थियो?
कुनै पनि खोपले क्लिनिकल परीक्षणहरू पूरा गरेको छैन, केही वैज्ञानिकहरूले स्वास्थ्य र सुरक्षा भन्दा राजनीतिमा डराउन सम्भावित उपचारको लागि पुश गइरहेका छन्।
यो पनि चिन्ता लिन सकिन्छ कि खोप लिनको दौड सबैभन्दा धनी देशहरूले जितेका छन्, सबैभन्दा कमजोरको खर्चमा।
एकै साथ १ भन्दा बढी बिभिन्न औषधिहरू गम्भ का मानिसहरूलाई पहिचान गर्नका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ।
सबै औषधिहरूको परीक्षण भईरहेको छ, केवल स्टेरोइड मात्र जीवन बचाउन प्रमाणित भएको छ र खोज एक महत्वपूर्ण सफलता भएको छ।
बेलायतको रिकभरी परीक्षणले देखायो कि स्टेरोइड डेक्सामेथासोनले भेन्टिलेटरमा बिरामीहरूको लागि तेस्रो र अक्सिजनमा हुनेहरूको लागि पाँचौंले मृत्युको जोखिम घटायो।
र थप डाटाले अर्को स्टेरोइड, हाइड्रोकोर्टिसोनलाई पनि समान रूपमा प्रभावकारी सुझाव दिन्छ।